Ny fironana infographic interactive | Martech Zone
Ny fironana infographic interactive
Talata, Desambra 10, 2013 Talata, Janoary 21, 2014 Savannah Marie
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay, an-tsary efa n'aiza n'aiza ary noho ny antony tsara. Ilaina matetika ny statistika mba hanampiana ny fahatokisana, ary ny infografika dia manamora ny famongorana ireo angona izay mety ho sarotra be tamin'ny mpamaky antonony. Amin'ny alàlan'ny fampiasana infografika dia lasa fanabeazana ny data ary mahafinaritra aza ny mamaky azy.
Satria efa ho akaiky ny 2013, ny infografika dia manova indray ny fomba handevonan'ny olona fahalalana. Ankehitriny, ny infografika dia tsy ahitana loko mamirapiratra, endritsoratra mahasarika maso ary endrika marevaka fotsiny. Ny sasany, antsoina hoe infografika mifanerasera amin'ny fomba mety, dia misy sary mihetsika, rohy ary singa hafa izay manamora ny fahafahan'ny olona mandray ny antsipirian'ny infographic mihitsy. Ireo infografika mandroso ireo dia manondro ny olona amin'ny làlan'ny fitadiavana atiny fanampiny mifandraika ihany koa. Aza mitsahatra mamaky hahalalana antony vitsivitsy hahatonga azy ireo ho anisan'ny paikadim-barotra momba ny atiny ho avy.
Mora noforonina izy ireo
Satria manintona ny maso ny infografika mifandraika dia mety heverin'ny olona ho sarotra be ireo singa famolavolana. Soa ihany fa ny haitao toy ny famolavolana mamaly dia nanampy tamin'ny famoronana tsotra ny infografika ifanakalozana, ary ny programa sasany dia mahomby kokoa na dia manandrana manangana iray tsy misy ambadika ao amin'ny kaody computer aza ianao.
Azon'izy ireo atao ny manampy ny marika na ny hafatrao
Azonao atao ny mieritreritra ohatra vitsivitsy amin'ny horonantsary Youtube na meme izay tsy re akory indray andro ary avy eo resahina tampoka avy amin'ny mpampiantrano lahateny amin'ny alina hatramin'ny namanao rehetra amin'ny media sosialy. Matetika, ny tanjaky ny tranga toy izany dia mifandraika amin'ny fomba fampitana ny atiny.
Ny tombony iray amin'ny infografika iraisana dia ny famelana anao hampiasa ny teny sy ny sary mihetsika mba hitondra fiara any an-trano. Raha misy olona mahatsikaritra, ny hafatrao na ny anaranao dia mety ho eo am-bavan'ny tsirairay ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ohatra iray, mpikatroka mafàna fo ao Syria dia nampiasa infographic interaktif mba hampisehoana ny faritra sy ny karazana fanoherana tsy misy herisetra, misy loko tsara tarehy, fisehoana mahafinaritra ary rohy manampy izay mamaritra ny ezaka manokana momba ny antony manokana amin'ny antsipiriany kokoa.
Manampy amin'ny fitazonana fampahalalana izy ireo
Infografika fifandraisana marobe no noforonina mba hisy ny anjaran'ny mpampiasa handehandeha, misy faritra manitatra rehefa voakitika amin'ny totozy totozy. Ankoatra ny fanampiana hisarihana ny saina dia manatsara ny mety haharetan'ny olona sy hianarany ireo fiasa ireo fa tsy tsindrio fotsiny any an-kafa. Ny infografika iraisana dia mamela ny fomba fijery hifehy ny zavatra niainany sy ny tahan'ny ianarany. Ny CJ Pony Parts dia namorona infographic interactive natokana ho an'ny fanavaozana ny indostrian'ny fiara, Carroll Shelby, ary ny zava-bita satro-boninahiny, ny Shelby Cobra. Ity infographic ity dia ahafahan'ny mpijery “mitondra” Shelby Cobra erak'izao tontolo izao.
Ny fifandraisana azo atao dia mety hanampy koa raha manandrana mampita fahasamihafana misy eo amin'ny habetsany ianao. Raha afaka mamindra ny totozy amin'ny ampahany amin'ny sary ny mpampiasa ary mijery manitatra azy io hanehoana isa manokana, dia mety hahatonga ny tahirin-kevitra hitazona ny fahatsiarovana azy kokoa izany fa tsy hadino haingana.
Afaka manampy anao hiteraka fitarihana izy ireo
Efa nieritreritra ny hampiasa infographic interaktif ho fitaovana varotra ve ianao? Mety ho làlan'ny ho avy izany, indrindra ho an'ireo olona mivarotra zavatra izay azo aterina amin'ny mpividy avy hatrany, toy ny e-book. Na manandrana mitarika olona liana amin'ny fanangonana toro-hevitra haingana ianao amin'ny fahazoana ilay asa tonga lafatra na te hampitombo ny isan'ny olona misoratra anarana amin'ny atiny premium an'ny bilaoginao, dia mety hampahafantatra amin'ny olona ny zavatra antenaina raha mividy zavatra izy ireo .
Avelao haka tahaka ny feo sy ny fomban'ny atiny hita ao amin'ireo entana amidinao ireo ilay sary, ary alao antoka fa manampy rohy izay mitondra ny olona mivantana amin'ny pejy iray ahafahan'izy ireo mividy entana.
Azonao atao koa ny manova kely an'ity paikady ity amin'ny alàlan'ny fampidirana singa mifandraika ahafahan'ny olona misoratra anarana ao amin'ny mailakao amin'ny tsindry iray fotsiny. Andramo ity raha vao nanolotra sary feno zava-misy mahavariana ianao, ary tianao ho azo antoka ny fahalalan'ny mpijery ny karazana atiny mitovy amin'izany.
Afaka mamindra ny fomba fijery izy ireo
Orinasa iray izay manome fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny olona any Filipina dia miankina amin'ny infographic interaktif ihany koa mba hampitandrina fa mety ho lafo tokoa ny marary amin'ny maha olona tsy misy fiantohana azy. Ny tanjona dia ny hampiantsoana olona izay mety manantena ny hijanona ho salama fotsiny ary ny manapa-kevitra ny amin'ny vidin'ny fiantohana ara-pahasalamana dia tsy zaka loatra. Amin'ny fampitahana tsara ny vidiny mifandraika amin'ny aretina lehibe mifanohitra amin'ny fandrakofana ara-pahasalamana, dia nanantena mazava ny mpamorona fa hanova ny fiheverana fa fiantohana ara-pahasalamana dia fandaniana tsy ilaina.
Azonao atao ny mikasa ny hanao zavatra mitovy amin'ny fanatonana ny mpanjifa aorian'ny tsy fahazoan-kevitra kely na hanasongadinana ny tombontsoa sasany amin'ny vokatrao izay mety tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpihaino kendrenao teo aloha.
Ny ohatra etsy ambony dia antony vitsivitsy fotsiny mahatonga ny fahendrena ny fampiasana sary mifandraika amin'ny paikadim-barotra ho avy. Ny mpivarotra sasany dia efa nampiasa azy ireo hahazoana vokatra tsara, ary toa miakatra hatrany ny lazany amin'ny volana ho avy.
Tags: Infografika iraisana-barotraMarketing Infographicsny fironana
Savannah Marie dia mpanoratra tsy miankina ary mpankafy ny varotra an-tserasera. Mafana fatratra ny hanaraka ny SEO, ny varotra an-tserasera ary ny fironana ara-tsosialy. Araho izy Twitter ary Google+.
AdTruth: Fanekena ny mpihaino finday
Ny herin'ny angon-drakitra momba ny harena ankibon'ny tany sy ny rafitra fanapahana fanapahan-kevitra
Dec 11, 2013 amin'ny 12: 08 AM
“Sarina teny arivo ny sary iray!”
Dec 12, 2013 ao amin'ny 1: PM PM
Misaotra nizara ny lahatsoratra! Info sary no fomba tsara indrindra hanovana ny mpamaky ho scanner